izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1326 by Rhodaf
Ivele ibhaliswe futhi ilandelwe ifayela le-Boeing 737-800 futhi yahamba kwinqubo yesifaki kepha akukho ndawo "kwi-Sim Objects / Airplanes" eyenza iBoinging ibonise. Ngenzani engalungile?
izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1327 by rikoooo
Unganginika yini isixhumanisi salokhu okungeziwe, sicela, sinabantu abaningi abangu-737 abanjelwe eRiooooo.
izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1330 by Rhodaf
Jet2.com Iphakheji ye-Boeing 737-800 Jet2.com .... ngine P3D I-v3 futhi yafaka isifaki ngamalungelo okuphatha, yahamba yalayisha indiza futhi akukho lutho, ngakho-ke uhlole izindiza ze-SimObjects futhi akukho lutho !!
izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1331 by rikoooo
Yebo, ngicabanga ukuthi awukhethanga P3Di-v3 njenge-simulator ngesikhathi sokufakwa.
Kumele ukhethe i-3D v3 elungiselelwe ukuze utshele umfakisi-auto lapho ukukopisha amafayela.
Zama futhi bese ungithumelela.
izinyanga 10 3 Sekwedlule amaviki #1332 by Rhodaf
Unobuhlakani ... futhi Im isimungulu !! Ngisebenzise izilungiselelo ezizenzakalelayo futhi kwakha i FSX Emidlalweni yeMicrosoft. Ngakho-ke kulokhu ngithathe incwadi yezandla yangena ekuphepheni futhi ngathatha eyami P3Dindawo ye-v3 ne-bingo !! Siyabonga ngokubekezela kwakho nosizo. Konke okuhle kwe-2019!
10 izinyanga 1 iviki edlule #1342 by rikoooo
Ngiyabonga ngempendulo yakho. Imvamisa othola okuzenzakalelayo uthola P3Dv3 indawo yamanje, ngokuzayo lapho kungafanele ukhethe ukufakwa ngokwezifiso, vele ukhethe ukufaka okuzenzakalelayo bese uhlola ibhokisi Prepar3D i-v3 kusuka kuhlu lwe-simulators.
Indiza ejabulisayo nomnyaka omusha ojabulisayo